ဘဝရှင်သန်မှုအကြားခြားနားချက်, စျေးကွက်ရှင်သန်, နှင့် le-vel ရှင်သန် - အကောင်းဆုံး Freeze အခြောက်စားနပ်ရိက္ခာကြီးထွားလာ
အအေးခံ အခြောက်ခံခြင်း အခြေခံများ
a Comment ချန်ထား	/ အေးခဲခြောက်အစားအစာရှင်သန် / အားဖြင့် အဒ်မင်
ဒီကုမ္ပဏီသုံးခုကို တူညီတဲ့နာမည်တွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ခင်မှာ, သူတို့ဘာလုပ်သလဲဆိုတဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကို ကြည့်ကြရအောင်.
Thrive Level သည် Le-Vel မှထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။. THRIVE အဆင့်သည် THRIVE ပရီမီယံလူနေမှုပုံစံစတဲ့ Capsules ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။, THRIVE Ultra Micronized Lifestyle Shake Mix, နှင့် ပရီမီယံလူနေမှုပုံစံ DFT (Derma Fusion နည်းပညာ). ၎င်းတို့သည် ပရီမီယံ သဘာဝ နှင့် ပေါင်းစပ် ဗီတာမင်စီ ဖော်မြူလာ များဖြင့် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားလျက် ရှိသည်။, သတ္တုဓာတ်, အပင်ထုတ်ယူမှုများ, Anti-Oxidants များ, အင်ဇိုင်းများ, Pro-Biotics, နှင့် Amino Acids. ၎င်းတို့သည် အမျိုးသားများအတွက် ကျား၊မ သီးသန့်ဖြစ်သော အတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်သည်။ & အမျိုးသမီး.
Thrive Premium Lifestyle capsules များသည် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။.
ပရီမီယံလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဆေးတောင့်တွေကို ဗိုက်မဆာဘဲ အိပ်ရာကနိုးတာနဲ့ သောက်သုံးဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။.
Thrive capsules သည် ဗီတာမင် စီ၏ သဘာဝ အတိုင်း သဘာဝ ဖော်မြူလာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။, သတ္တုဓာတ်, ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ထုတ်ယူမှုများ, ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ, အင်ဇိုင်းများ, ပရိုဘိုင်အိုတစ် နှင့် အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ နှင့် တီထွင်ဖူးသမျှ ပထမဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသော အလွန်ကောင်းမွန်သော ဖော်မြူလာဖြစ်သည်။.
Anti-aging နှင့် antioxidant ရောစပ်ထားသည်။
အစာချေဖျက်မှုနှင့် ကိုယ်ခံအားကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
THRIVE Premium DFT is the icing on the cake. THRIVE အဆင့် Premium Lifestyle Capsule နှင့် THRIVE Premium Lifestyle Shake Mix ပါသော DFT patch ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် THRIVE အဆင့်ကို ပြီးမြောက်စေသည် 8 တစ်ပတ်အတွေ့အကြုံ. သင်သည် အထူးပရီမီယံကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။, အာဟာရအတွက် မယှဉ်နိုင်သောရလဒ်များ, ကိုယ်အလေးချိန် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြံ့ခိုင်မှု.
Derma Fusion နည်းပညာ
Thrive level Premium Lifestyle Shake Mix သည် Premium ကို ဖြည့်စွက်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
လူနေမှုပုံစံ တောင့်တောင့်နှင့် သောက်သင့်သည်။ 20 ရန် 40 ဆေးတောင့်များသောက်ပြီးနောက်မိနစ်.
အာဟာရဓာတ်များ ကြွယ်ဝသော ဖော်မြူလာ
ပရိုဘိုင်အိုတစ်နှင့် အင်ဇိုင်းများ ရောစပ်ထားသည်။
ဖြည့်စွက်ကာ, customers also take capsules and drink special Thrive nutritional shakes. And because health (and weight loss in particular) involves more than what you put into your body, Thrive Experience also incorporates tailored eight-week fitness plans.
ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အနီးကပ်လေ့လာကြည့်လျှင် ဤထုတ်ကုန်များသည် အခြေခံအားဖြင့် ဗီတာမင်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း ထင်ရှားစေသည်။, အမိုင်နိုအက်ဆစ်, အင်ဇိုင်းများ, နှင့် probiotics (ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်သမျှ, ဒါပေမယ့် အစားအသောက် တော်တော်များများ ချို့တဲ့တယ်။), အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု၏ထုတ်ကုန်အဖြစ်.
သဘာဝ Forslean မူရင်းနှင့် ကော်ဖီစေ့နှင့် လက်ဖက်စိမ်း MDFVFD ပမာဏကောင်းများ
အဲဒါက အရာအားလုံးနဲ့ ပတ်သက်တယ်။. Thrive ထုတ်ကုန်များတွင် ထူးဆန်းသော ဓာတုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တရားဝင်လောက်သာ ဝှက်ထားသော ဆေးဝါးများကို သင်တွေ့ရှိမည်မဟုတ်ပါ။. သင်တွေ့ရမယ့်အရာက ဘယ်သူက အသုံးဝင်တဲ့ အာဟာရလဲ။. အထက်ဖော်ပြပါ ကြံ့ခိုင်မှုအစီအစဉ်နှင့် ပေါင်းစပ်သောအခါ, ၎င်းသည် Thrive အမှတ်တံဆိပ်နှင့်တွဲဖက်ထားသော ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များကို ယုံကြည်စိတ်ချမှုအချို့ကို ပေးဆောင်သည်။.
အခြောက်လှန်းထားသော အစားအစာများကို အေးခဲပြီး ရှင်သန်နေထိုင်ပါ။
အသက်ရှည်ပါစေ။ (Thrive Market နှင့် မရောထွေးရန်) အေးခဲခြောက်ကုန်ခြောက်များကို အဆင့်လိုက် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သော အစားအသောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။.
သံသယတစ်ခုမှမရှိဘဲ, လူများမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ “သင့်တွင် အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များ ရှိပါသလား။?” ပြီးတော့ အဖြေက ဟုတ်တယ်။. အချို့သောထုတ်ကုန်များသည် အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည်။, ဒါပေမယ့် အဲဒါထက် နည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးတယ်။.
အသိအမှတ်ပြု အော်ဂဲနစ်လယ်ယာတစ်ခုရရှိခြင်းသည် ရှည်လျားပြီး စျေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ကြည့်ပါ။. သင့်အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို တစ်နေ့တာလုံး စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။, ဒါပေမယ့် USDA မှာ အော်ဂဲနစ်တံဆိပ်ပါတာကြောင့်ပါ။, ဤရှည်လျားပြီး စျေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို မလုပ်ဆောင်ပါက ၎င်းတို့အားလုံးကို အော်ဂဲနစ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်၍မရပါ။.
ထို့ကြောင့် ကုန်စုံဆိုင်တွင် အော်ဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို နောက်တစ်ကြိမ်ဝယ်ပြီး ငွေပေးချေခြင်းအတွက် သင့်ကိုယ်သင် ချီးကျူးပါ။ “အစားအသောက်စျေးနှုန်းအမှန်,” သင်သည် ဗျူရိုကရေစီ၏ တကယ့်စျေးနှုန်းကို အမှန်တကယ်ပေးဆောင်နေကြောင်း သတိရပါ။. Thrive life is on site where you get both natural and organic products.
Sugar comes first, before yogurt. Then, after yogurt, there is usually concentrated fruit juice (based on flavor), tapioca starch, အရသာ (what is it?) and riboflavin.
ရှင်သန်ပါ။ (at ThriveFreeze.com we sell Thrive Life Freeze Dried products) only sell pre-made products, just add water. These types of products have their place. You take them for emergencies sometimes when you can’t cook. They are also nice to have during daytime when you haveabusy schedule. ထို့အတူ, when you are not organized yet and just needaquick meal.
ရှင်သန်ပါ။, စျေးကွက်ရှင်သန်, Honeyville, and Augason Farms have products available as individual ingredients in separate boxes. This means that they are easy to use and run in your own old, usual recipes. This allows you to “eat what you store and store what you eat”. Thrive life only offersafew “just add water” meals, and thrive level probably offers the most (but they also havealot of single-ingredient foods).
Most food storage comes in 10 tin cans (1 gallon cans),5ရန်6gallon pails, or in bulk (you have to pack it yourself). Sometimes wrapping the food yourself can be the cheapest option. This make these foods vary in quality.
Thrive cans are double coated to prevent rusting on the outside ora“tinplate” taste on the inside. The last time I checked, Thrive Food uses thickest, highest quality cans of any company. ၎င်းတို့၏ တုံးများသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ဂမ်မာထုပ်တစ်ခုပါလာသည်။.
Eating well is something more people are trying to do today. သငျသညျကျန်းမာအစားအစာကိုစားချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ပိုမိုအချိန်ရှိသည်မဆိုလိုပါ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစာအတွေးအခေါ်များကိုရှာဖွေနေသငျသညျတှေ့ရ, အစဉ်အမြဲကျန်းမာဖြစ်ကြောင်းအမြန်ချက်ပြုတ်နည်းများပါဝင်သည်တံ့သော. It is easy to find dishes that you will want to make repeatedly.
Thrive Market သည် သဘာဝနှင့် အော်ဂဲနစ်အစားအစာ ထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်နေသည့် အမေရိကန် e-commerce အသင်းဝင်အခြေခံ လက်လီရောင်းချသူဖြစ်သည်။. Nick Green က တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။, Gunnar Lovelace, Kate Mulling, နှင့် Sasha Siddhartha. သူတို့ရဲ့ website အရ သိရပါတယ်။,
၎င်းသည် အခြေခံအားဖြင့် အဓိကဖြစ်သည်။5အားလုံးသဘာဝ, အပင်အခြေခံ, GMO မဟုတ်သော, Gluten ကင်းစင်ပြီး အာဟာရဖြစ်စေသော ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ထုတ်ကုန်အားလုံးကို တစ်ဦးချင်းထုပ်ပိုးထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အလွန်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး သယ်ဆောင်ရအလွန်လွယ်ကူပါသည်။. ဒါတွေအားလုံးနဲ့, ရောနှောရန်မလိုအပ်ပါ။, တိုင်းတာ, သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို ယူရန် သတိပေးချက်များ သတ်မှတ်ပါ။.
ရိုးရိုးလေး နိုးထပါ။, ယူ2ဆေးတောင့်များနှင့် 20-40 မိနစ်အကြာတွင် Lifestyle Mix shake ကိုသောက်ပြီး DFT ကို လိမ်းပါ။.
သန့်ရှင်းလှပခြင်း။, အဆိပ်အတောက်မရှိသော အိမ်တွင် သဘာဝမြေသြဇာ ပန်းကန်ပြားများ
အောက်ဖော်ပြပါများသည် အောင်မြင်သောစျေးကွက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့် အင်္ဂါရပ်အနည်းငယ်ဖြစ်သည်။
Thrive Market အက်ပ်တွင် လော့ဂ်အင်ဝင်ပါ။, အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။, မြန်ဆန်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။. ကုန်သွားသည်ကိုမြင်သည်နှင့် ပစ္စည်းများကို လှည်းထဲသို့ထည့်ရန် လွယ်ကူသည်။.
အဘို့ စျေးကွက်ရှင်သန်, သင်ပေးဆောင် $60 နှစ်စဉ်အသင်းဝင်ကြေး, အကောင့်ဖွင့်ပါ။. အခြားအွန်လိုင်းလက်လီရောင်းချသူများနှင့် ဒေသတွင်းကုန်စုံဆိုင်များတွင် တူညီသောထုတ်ကုန်များစွာကို သင်ရှာတွေ့နိုင်သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေများပါသည်။. ဒါပေမယ့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအပိုင်းကတော့, အခပေးအဖွဲ့ဝင်မှုတိုင်းအတွက် ဝင်ငွေနည်းသော စစ်ပြန်တစ်ဦးအား အခမဲ့အဖွဲ့ဝင်ခြင်းကို ပေးသည်။, အစိုးရကျောင်းဆရာ, သို့မဟုတ် မိသားစု.
ဒါက နောက်ထပ် ဘောနပ်စ်ပါ။: ထက် ပိုနေမယ်။ $ 49, ပို့ဆောင်မှုသည် အမြဲတမ်း အခမဲ့ဖြစ်သည်။.
၎င်းတို့၏ အသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ်နှင့် ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း ပြောဆိုခြင်း။, အားလုံးသွားလာရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။, သူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ပုံမှန်အသုံးပြုသည့် အစားအစာနှင့် မပျက်စီးနိုင်သော ပစ္စည်းအများအပြားကို သယ်ဆောင်လာကြသည်။, ထုပ်ပိုးမှုနှင့် ပို့ဆောင်မှုသည် အထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။. ခိုင်ခံ့သောပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကာ ဖန်ခွက်ကို အခြားအရာအားလုံးနှင့် သီးခြားစီထုပ်ပိုးကာ ယိုစိမ့်နိုင်သည့်အရာမှန်သမျှအတွက် ပလပ်စတစ်အိတ်များကို ခွဲထုတ်ကာ အံ့ဩစရာအလုပ်တစ်ခုလုပ်သည်။.
ဖြစ်ရမယ်။ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ မှတ်ချက်တစ်ခုတင်ရန်.
အခြောက်လှန်းထားတဲ့ အစားအစာတွေကို ဘယ်လောက်ကြာအောင် အေးခဲထားသလဲ။